Forum serasera malagasy Alahamady be volana Malagasy tena izy - Dinika forum.serasera.org
Alahamady be volana Malagasy tena izy
Fitohizan'ny hafatra : Alahamady be volana Malagasy tena izy
Rabaradaka - 01/09/2010 13:01
Ny Jaky mena sy ny zanaka Ambohitrabiby dia nanome daty ny Alahamady izay tsoriko eto fa diso ary lasa fitaovana politika ilay Alahamady amin-dry zareo.
Ny Alahamady dia mifanakaiky foana amin'ny fotoanan'ny RAMADAN silamo satria aoka ho fantatsika fa avy amin'ny arabo ny datin'andro gasy dia mitombina tanteraka raha mifanindran-dàlana ireo fotoana ireo. Koa ny ALAHAMADY BE amin'ity taona ity dia ny alarobia 08 septambra 2010 maraina amin'ny 10 ora sy 30 minitra, eo amin'ny andian-kintana vièrge no misy azy. Soraty ao anaty diarinao ary io daty io dia samia ho tahian-Janahary e !
soanja - 02/09/2010 06:17
Raha ny fahafantarako azy dia avy amin'ny zafi-Raminia ireo Arabo razantsika. Ireo anefa dia toa mbola pre-Islamic no fahafantarako ny mombamomba azy ireo. Raha mandinika ny tantara isika dia ireo tao anaty ROVA dia arabo avy any amin'ny antaimoro na ny taranaka Antalaotra ihany.
Koa raha izany dia tsy voatery hifanakaiky amin'ny Ramadany ny raharaha satria ireo dia tsy nahalala an'i Mahometa fa nanome bebe kokoa ny famakiana ny kintana sy ny sikidy isan-karazany.
Raha ny fahafantarako azy dia tokony tamin'ny 24 Juin teo ny faran'ny taona Malagasy ary manomboka ny 25 Juin ny voalohan'ny taona ka herinandro ny tokony hanaovana ny fety.
Oviana anefa no izy araka ny politika misy hono?
rabaradaka - 02/09/2010 07:25
Misaotra ry namana naneho hevitra. Ny zafiraminia tokoa dia tamin'ny fotoana talohan'ny Mahomet nefa ny andiany faharoa (vers IXe siècle) dia efa "islamisé" izy ireo. Ireo moa no lazaina hoe razan'ny Antemoro araka ny voalazanao, nefa misy mpikaroka sy mpiteniteny foana koa milaza hoe jiosy izy ireo. Raha ny fanadihadiana dia tena silamo ireo ary tany MAhailaka (District d'Ambanja, Région DIANA) dia efa nisy mosquée tamin'ny taonjato faha-X naorin'ireo afrikana sy karana izay nanao varotra tany. Izany hoe ny fidiran'ny tononandro GAsy dia tamin'ny fidiran'ireo mpihavy "islamisé" teto Madagasikara. Manana diary gasy hatramin'ny 1885 i rabaradaka ary mbola tsy nisy daty na andro nifandiso na iray aza hatramin'izao. Ny daty napetraky ny Jaky mena mantsy dia hoe nanao kajy sy fitanisana tamin'ny alalan'ny "éphemeride" sy ordinateur ry zareo. F'angaha moa nanana izany ny razantsika taloha fa dia io volana io no jereny. Izay ry dadatoa sy nenitoa no azo ambara fa dia samia ho tahin'Andriamanitra. Mbola azo tohizana raha tianao
soanja - 02/09/2010 08:12
Tohizantsika ary ny tafa. Tsy diso tokoa raha nisy ny moska sy ny tranobory tany faritra DIANA saingy ireny ve no nitondra ny Alahamadibe? Ny tena izy mantsy dia noravaravain-dry zareo Portigezy ny zavanisy tany tamin'izany, sa tsy izay. Ry zareo arabo rahateo tsy naharitra fa lasa.
Ny resaka Jiosy dia mbola fanadihadihana fa tsy hoe tena izy. Mbola samy miketrika iza marina ry zareo avy ao Vohipeno saingy rehefa atao ny kaonty dia misy ifandraisany ihany tamin-dry zareo tao Iharana.
Ka raha hiteny ve i Soanja hoe manana diary hatrany amin'ny 1817 dia ahoana izany ny tena tokony handraisantsika azy?
Misaotra anao hatrany.
rijadolly - 11/09/2010 19:22
Sao dia misy azonareo angalana hevitra kely io amin' fandinihanareo...
soanja - 12/09/2010 23:00
Tsy mandeha ilay rohy, Rija. misaotra nanoro koa.
rafitiab - 14/09/2010 05:41
tsy hoe diso akory io raba fa ireo milaza azy ho mpandala ny mahamalagasy dia samy manana ny fomba fanisany andro avokoa. raha mijery ny bokin'ny Ratany dia hafa indray ny azy ny Alahamady. noho izany dia tsy mitovy hevitra izy ireo hany ka lasa tsy maharototra ny olona ilay izy.
ngaila - 22/09/2010 16:12
mahaliana izy zany
jojo-bebe - 20/10/2010 12:18
andrywui - 23/10/2010 22:27
salut rajojobe ! Ny resaka Jiosy dia mbola fanadihadihana fa tsy hoe tena izy. Mbola samy miketrika iza marina ry zareo avy ao Vohipeno saingy rehefa atao ny kaonty dia misy ifandraisany ihany tamin-dry zareo tao Iharana. MARINA IZANY E
..fa aoana hono ny tena fandehany ry bainn ? - misy tokony ho faizina mafimafy any ho any fa mila mifampiantso kely isika fianakam's a !
cyril - 23/10/2010 22:46
Ory bain fa maninona no ps sipakely sy ramatoa no entin ialahy eto,tonga dia tsory raha te ihodina eny bois de boulogne ialahy fa tsy eto no hampiesona kill eto